Shiinaha 95% polyester 5% spandex xamuulka caadiga ah ee ragga gaagaaban ee jimicsiga gaagaaban socod gaaban Warshadaynta iyo Warshadda | Caqli badan
95% polyester 5% spandex xamuulka caadiga ah ee ragga gaagaaban ee jimicsiga gaaban ayaa socod gaaban
Shorts -ka dhididka ah waxaad ku dabooshay waaxda qaabka. Gawaaridaan gaaban waxaa ka muuqda dhexda la isku hagaajin karo, jeebka dambe, jeebka gacanta, qaab habboon oo joogto ah. Si kasta oo ay xilliyadu isu beddelaan, gaagaaban waxay qaadan karaan maalmaha Guga iyo Xagaaga. Iyada oo la yaqaanno surwaalka maalinlaha ah ee aad ugu jeceshahay isla sanduuqa. Midab adag, oo lagu gooyey si joogto ah oo habboon iyo terry faransiis gudaha ah ama dhogor si raaxo loogu helo. Waxaa dhiirrigeliyay qaabaynta firaaqada caadiga ah iyo shaqada irbadda, gaagaaban habboon ee caadiga ah wuxuu ka kooban yahay aasaaska aan waqtiga lahayn. Gawaaridan gaaban wuxuu u fiican yahay xaalado badan, sida dhaqdhaqaaqyada bannaanka ka baxsan ee lagu xidho, isboortiga, guriga la joogo, kulanka saaxiibbada ama xirashada qoyska iyo xafladda. Badeecadaha waaweyni waxay dhaafi doonaan 12 tillaabood oo laga soo bilaabo dunta suufka polyester -ka ilaa alaabada la dhammeeyay oo ay ku jiraan dhowr tallaabo oo kormeer tayo leh si loo gaaro gacmaha macaamiisha.
Cabbirka: S Dhexda: 64-106cm/25.2-41.7 ″ Dhererka: 51cm/20.1 ″ Sinta: 105cm/41.3 ″
Cabbirka: M Dhexda: 68-110cm/26.8-43.3 ″ Dhererka: 52cm/20.5 ″ Sinta: 109cm/42.9 ″
Cabbirka: L Dhexda: 72-114cm/28.3-44.9 ″ Dhererka: 53cm/20.9 ″ Sinta: 113cm/44.5 ″
Cabbirka: XL Dhexda: 76-118cm/29.9-46.5 ″ Dhererka: 54cm/21.1 ″ Sinta: 119cm/46.9 ″
Cabbirka: XXL Dhexda: 80-122cm/31.5-48.0 ″ Dhererka: 55cm/21.7 ″ Miskaha: 125cm/49.2 ″
60% suuf, 40% poly
Qaab cad oo joogto ah oo leh farshaxan daabacan
9.12 oz./sq. ama 260 gsm
Feedhka suufka Spandex ee dhexda
Handfeel dhar jilicsan iyo qaabka unisex fashion
Dhexda Drawcord-hagaajin karo
Jeebka dhabarka ee keli ah
Jeebka gacanta dhinac
Been abuurka Terry ee Faransiiska
Qaabka cad ee midabaysan
Calaamadda caadada OEM waa la aqbalay
Summada OEM iyo goynta hangtag waa la aqbalay
Shuruudaha xirmada gaarka ah waa la aqbalay
24 saac oo muunad ah
Waxaan nahay soo -saare leh in ka badan 15 sano soo -saarka iyo khibradda dhoofinta.
Nidaamka kormeerka tayada adag iyo hubinta tayada aad u fiican annaga, sidoo kale kormeerka dhinac saddexaad ayaa la aqbalay sida SGS, ITS.
Baaritaanka warshadda BSCI
Qiimo macquul ah iyo gaarsiin degdeg ah
Xirfadlaha Ingiriisiga ku hadla ee iibinta iyo adeegga iibinta kadib
200,000pcs bishii awoodda wax soo saarka
Iskaashi lala yeesho in ka badan 56 dal oo macaamiisha adduunka ah iyo xiriir ganacsi oo muddo dheer la leh macaamiisheenii hore sida sumadaha Ross ， Forever 21, iwm.
Shahaadada Asalka ayaa sidoo kale la adeegsan karaa
Tallaabooyinka wax -soo -saarka oo ay ka mid yihiin dunta suufka, maro -tolidda, midabka midabaynta, dejinta dharka, kormeerka marada, goynta dharka, kormeeridda suufka, daabacaadda ama baakadaha dharka, tolidda dharka, kormeerka dharka, kaarinta dharka, baakadaha alaabta, baaraha irbadaha ee suuqyada Japan iyo Australia .
Badeecadaha waxaa lagu rari karaa Badda, Hawada, Gawaarida (DHL, UPS, FEDEX).
Maalmaha gudbinta dhoofintu way ka duwan yihiin dalal kala duwan iyo meel loo socdo. Caadi ahaan, Carrier-ku wuxuu qaataa 4-10 maalmood, Hawada waxay qaadataa 3-5 maalmood, Sear waxay ku saabsan tahay 20-30 maalmood.
Hore: Saraawiisha Yoga ee Tayada Sare leh Calaamadaha Gaarka ah ee Dumarka Lugaha Dhexda Sare
Xiga: Dumarka Midabka adag ee Dabacsan Dusha Sare ee Dhididka ah Gabar gacmo dheer leh Pullovers dabacsan qabow
Saraawiisha Yoga Tayada Sare Summad gaar ah Wo ...
Lugaha Jir -dhiska Sare ee Haweenka Dumarka Orodka ...
design caadadii daabacay logo midab adag shanaad le ...